ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးမင်းသားဖြစ်လာတဲ့ လူဆိုးတယောက်ရဲ့ အထ္ထုပ္ပတ္တိ - Thutazone
Homepage / People / ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးမင်းသားဖြစ်လာတဲ့ လူဆိုးတယောက်ရဲ့ အထ္ထုပ္ပတ္တိ
လောကကြီးထဲကသာမာန်သမားရိုး ကျမွေးဖွားမူတခု ။
သာမာန်လက်လုပ်လက်စား မိသားစုတစုရဲ့ သာမာန်မွေးဖွားမူတခု ကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ တယ်လ်ဝါဆေးရုံမှာ ကလေးတယောက် ဒီလောကကြီးထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ညနေစောင်းအချိန် ၅နာရီမိနစ်၄၀ခန့်မှာပေါ့။
“ကျတော် ဘယ်လိုမွေးလာလဲ ကျတော် ဘယ်မိဘကမွေးလာလဲ ကျတော် ဘယ်မိသားစုကမွေးလာလဲ အရေးမကြီးဘူး။
ကျတော် ဘယ်လိုသေဆုံးမလဲ ကျတော့် နာမည်ဘယ်သူသိကျန်ခဲ့မလဲပဲ ကျတော့ အတွက်အရေးကြီးတယ်။”
အဲ့ဒိကလေးရဲ့နာမည်ကို ကားဒရိုက်ဘာဖြစ်တဲ့ဖခင်က #ရှာရွတ်ခန်း လို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူ့အဖိုးခေတ်ကသူ့အဖိုးအရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ လူကြမ်းပြဇာတ်မင်းသားကြီးရဲ့ နာမည်မို့လို့ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ Khan အသက်၅နှစ်မှာပဲ မိသားစုအဆင်မပြေမူကြောင့် အဖိုးဖြစ်သူရှိတဲ့ မန်ဂါလိုရီ ကိုပြောင်းရွှေခဲ့ကြပါတယ်။ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့အဖိုးဟာ Khanကိုအရမ်းချစ်တဲ့သူ တယောက်ပေါ့။ အဖိုးဖြစ်သူဟာ ပါကစ္စတန်သားဖြစ်ပီး အိန္ဒိယမှာအလုပ်လာလုပ်ရင်းကအိမ်ထောင်ကျခဲ့ရာက Khanရဲ့ဖခင် Meer Taj ကိုမွေးဖွားခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် Khan မူကြိုတက်ရမယ့် အရွယ်မှာတော့ ကျောင်းနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့အဖိုးဖြစ်သူရဲ့အိမ်က အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲသူတို့မိသားစုဟာအဖိုးဖြစ်သူဆီကငွေ တချို့နဲ့အတူ ရာဂျင်ဒါနာဂါ မြိူ့မှာအိမ်ငှားနေခဲ့ကြ ပါတယ်။ အိမ်နံပတ် F-442 ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ မူကြိုစတက်ခဲ့ရပီး Khanဟာမူကြိုကျောင်းသားကြီးတယောက်ပေါ့။
ဆရာမ – ” Khan သားကြီးလာရင်ဘာလုပ်မှာလဲ”
Khan – “ဗိုက်ဆာနေတဲ့သူတွေကို မုန့်လိုက်ကျွေးတဲ့သူ လုပ်မယ်ဆရာမ”
ဆရာမ – “ဟေ ”
ဒီလိုနဲ့ Khan ပထမတန်းကိုစတက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြသနာကတော့ကျောင်းနဲ့ ထပ်ဝေးတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ဖခင်ရဲ့သားအပေါ်ချစ်တဲ့စိတ် ပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ Khan ကို သူမနက်တိုင်းပွဲရုံကိုကားမောင်းသွား ရတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ St.Columba’s အထက်တန်းကျောင်းကြီးမှာ Khanကိုတက်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။ လူချမ်းသာသားသမီးနဲ့ဂုဏ်ထူးဂုဏ်ပြိုင်သားသမီးတွေပေါများတဲ့ ဒီကျောင်းဟာ Khanလို ကားဒရိုက်ဘာသားတယောက်အဖို့တော့ မတန်မရာပါ။ ဒါပေမယ့် Khanဖခင်ဟာသားကို ပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့တက်စေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာပထမကျောင်းတက်တဲ့နေ့မှာပဲ Khanလိုပဲ ပေါင်မုန့်ပို့သမားရဲ့သား Jazam ဆို တဲ့ဆံပင်ကောက်ကောက်အရပ်ပုပုကောင်လေးတယောက်နဲ့အတူထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ သူငှေးသားသမီးတွေကဒီလိုကောင်တွေကို ဘယ်အပေါင်းအသင်းလုပ်ပါ့မလဲ။ ဒီတော့အတန်းရဲ့နောက်ဆုံးတန်းမှာထိုင်ရတဲ့ Khanတို့အတန်းဟာ အပေါင်းအသင်းမရှိတဲ့လူဆိုးတန်းပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီနောက်ဆုံးတန်းမှာထိုင်တဲ့ ၄ယောက်ဖြစ်တဲ့ Khan / Jazam / Mandamm / Arhmi ၄ယောက်ဟာ နောင်တချိန်မှာဂီတလောက ပန်းချီလောက စာပေလောက ရုပ်ရှင်လောကမှာအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့အဲ့အချိန်က ဘယ်သူကသိမှာလဲ?
အိန္ဒယဇာတ်ဝင်တေးလောကကို အသက်၂၀ ကျော်ထဲကတေးရေးတယောက်နဲ့ဝင်လာခဲ့ပီး Bollywood ရုပ်ရှင်လောကရဲ့နာမည်ကြီးကားတွေမှာတေးဂီတမှူးနေရာက ယနေ့အချိန်မှာပါနေသူ။ Doom ဇာတ်ဝင်တေးရဲ့တေးရေးကြီးပေါ့။
Mandamm – Secret Of Gods စာအုပ်နဲ့ဘာသာ၄ခုရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကိုရေးပြခဲ့တဲ့စာအုပ် နဲ့ Best Seller စာရေးဆရာ /
Arhmi – အမေ့ဆေးဖိုးရှာဖို့၅တန်းနဲ့ကျောင်းထွက်ခဲ့ပီးသကြားသီးလိုက်ကောက် လမ်းမပေါ်ဖိနပ်လုတိုက်ရတဲ့သူက နောင်တချိန် အမေရီကန်အိမ်ဖြူတော်ဧည့်ခန်းမကြီးကပန်းချီကားကိုဆွဲရတဲ့ ပိုလန်နန်းတော်ကဂန္တဝင်ပန်းချီကားကြီးကိုပြန်မွန်းမံခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာ /
Khan – ? သူကရော ဘာဖြစ်လာမလဲ ?
” ကျတော် လောဘမကြီးဘူး ကျတော် နာမည်မကြီးချင်ဘူး ကျတော် လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအသက်နဲ့ပါရင်းပြီးကြိုးစားနေရရင် ကျေနပ်ပီ ”
ဒီလိုနဲ့ ဒီလူဆိုး၄ကောင်ဟာကျောင်းရဲ့ဆိုးသွမ်းလူငယ် စာညံ့တဲ့ကျောင်းသားတွေအဖြစ် နှစ်စဉ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသူတွေပေါ့။ ကြယ်၅ပွင့် အဖြူလေး ရတဲ့သူကထူးချွန်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ပညာရေးစနစ်မှာ Khan တို့၄ကောင်ကတော့ အမြဲလိုလို ကြယ်၅လုံး အမည်းရခဲ့ကြပါတယ်။ Report Cardထွက်တိုင်းအတန်းပိုင်ဆရာမရိုက် တာခံရစမြဲ။ ဒဏ်ပေးခံရစမြဲ မိဘခေါ်ကြရစမြဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် မူလတန်းတတိယနှစ် (၃တန်း) မှာ Khan ဟာသူ့ကိုသားတယောက်လိုဆုံးမပေးတတ်တဲ့ဆရာ Rajerer နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဟာ Khanကိုအမြဲအားပေးတယ်။
“မင်းဟာထူးချွန်တဲ့လူမူနယ်ပယ်ကလူတွေထက် အသုံးဝင်တဲ့လူတော်တယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်”လို့ အမြဲအားပေးခဲ့တဲ့ဆရာစကားက Khan ယနေ့ အချိန်ထိ သူ့အိမ်ကဧည့်ခန်းမှာချိတ်ထားတဲ့စာစုလေးပေါ့။ “လူတော်ထက် အသုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်ပါ “တဲ့။ ဒီလိုနဲ့စာညံ့လို့မိဘအမြဲခေါ်ရတဲ့ Khan ဟာ တရက် Report Cardထွက်တော့ထုံးစံအတိုင်း အဖေဖြစ်သူကို အတန်းပိုင်ဆရာမကခေါ်ပါလေရော။ ဖြစ်ချင်တော့Khan အဖေဟာနေမကောင်းဖြစ်နေလို့မလိုက်နိုင်ပဲ မိခင်ဖြစ်သူကအစားလိုက်သွားခဲ့တယ်။
“ရှင့်သားက ဒီတိုင်းဆိုဘယ်လိုမှထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလိမ်မာရေးခြားရှိအောင် သူ့ကိုဆုံးမပေးစေချင်တယ်ရှင် “ဆိုတဲ့အတန်းပိုင်ဆရာမစကားက Khanအမေကို မျက်ရည်ကျစေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒိနေ့ကKhan ဟာသူ့အမေမျက်နှာညှိုးညှိူးကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ “သားအမေ့ကိုပြော သားဘာဖြစ်ချင်လဲ သားမှာအိမ်မက်မရှိရင်သားဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး ”
“အမေ သားမှာအိမ်မက်မရှိဘူး ” ။ သားဖြစ်သူရဲ့ အဖြေကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူဟာ Khan ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းပိတ်ချိန်တွေမှာဘာ သာရေးစာအုပ်တွေပေးဖတ်တယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုလိုက်ပြတယ်။ အောင်မြင်သူတွေရဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုလိုက်ပြစေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Khan ဟာအရင်အတိုင်း ဆိုးမြဲပါပဲ။ ကျောင်းကကောင်မလေးတင်ပါးကိုကိုင်လို့မိဘခေါ်ရတာတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အရက်ခိုးသောက်တာမိလို့အတိုင်ခံရတာတွေကြောင့် မိဘ၂ပါးဟာစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာ Khan ကိုတရက် အရက်ဆိုင်ကိုခေါ်ပီးစကားပြောခဲ့တယ်။
“သား မင်းသောက်ကွာ ငါခွင့်ပြုတယ်”
“အဖေ သားမသောက်ဘူး အမေဆူလိမ့်မယ် ”
“သောက်စမ်းပါ မင်းအမေကအရေးမကြီးဘူး မင်းပျော်ဖို့ကအရေးကြီးတယ် မင်းအမေမရှိလဲမင်းဖြစ်တယ်မှတ်လား ”
“အမေမရှိရင် သားမနေတတ်ဘူးအဖေ ”
“ဘာ ဒါဆိုဘာလို့မင်းအမေစိတ်ညစ်အောင်လုပ်လဲ မင်းအမေညတိုင်းငိုအောင်လုပ်လဲ ”
“အဖေ အမေငိုအောင်သားမလုပ်ပါဘူး သားအမေငိုတာလဲမသိဘူး
“အေးငါပြောမယ် မင်းအမေက ငါနဲ့လက်ထပ်ဖို့သူ့မိဘတွေဆီကထွက်ခဲ့ရတယ်၊ ငါအဲ့တုန်းကအရက်ကိုကြိုက်ခဲ့တယ်။ မင်းအမေငိုခဲ့တယ် သူငါ့ကိုယူ လို့နောင်တရငိုတာမဟုတ်ဘူး သူအရက်သမား တယောက်နဲ့ မိသားစုကိုလဲခဲ့ပီး ငါ့နောက်လိုက်လာခဲ့တယ် ၊သူငိုတာငါမြင်ခဲ့ထဲကအရက်ပြတ်ခဲ့တယ် ၊ ငါသူ့ငိုတာထပ်မမြင်ချင်တော့ဘူး သူ့ကိုနောက်တခေါက် အရက်သမားရဲ့အမေမဖြစ်စေချင်ဘူးသား ”
“သား အရက်ခိုးမသောက်တော့ပါဘူး အဖေ ”
“သား အမေမပြုံးတာကြာပီ၊ အဖေ့ကိုလက်ထပ်ပီးသားကိုမွေးထဲက သူ့အပြုံးတွေ မျက်နှာမှာမရှိတော့တာကြာခဲ့ပီ ၊ သူ ပြုံးအောင်သားလိမ်မာပေးလိုက်ပါ ”
အဲ့ဒိနေ့ကစပြီး Khan ဟာမိခင်ဖြစ်သူ စကားကိုနားထောင်ခဲ့ပီး မလုပ်ချင်တဲ့စာကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ အကျိူးဆက်ကတော့ အတန်းထဲသူ စာတော်တဲ့ကျောင်းသားမဖြစ်တာတောင်ကြယ်ဖြူလေးတပွင့်တခါတလေရခဲ့တယ်။ သူ့အမေအပြူံးတွေပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ သူကြယ်ဖြူတပွင့်ရတိုင်း မိခင်ဖြစ်ဟာ ရုပ်ရှင်လိုက်ပြလေ့ရှိတယ်။ အဲ့ဒါက Khan ရဲ့အိမ်မက်ကိုစတင်မွေးဖွားဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တရက်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်အပီး ပွဲဈေးထဲ ပဲနံပြားစားနေချိန်
“အမေ သား လူကြမ်းမင်းသားဖြစ်ချင်တယ်”
“ဟေ သူများတွေကမင်းသားဖြစ်ချင်တယ်ပဲပြောကြတာပါ သားအလှည့်မှ လူကြမ်းလား”
“သား မင်းသားထက် မင်းသားကိုပိုလက်ခုတ်တီးအောင် အထိုးခံပေးရတဲ့ လူကြမ်းကိုပိုသဘောကျတယ်အမေ သားလူကြမ်းဖြစ်ချင်တယ် “တဲ့
အဲ့နေ့ကစပီး Khanဟာ ရုပ်ရှင်လောက ကိုစတင်ရူးသွပ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့Khanဘဝမှာ အရူးသွပ်ဆုံးသရုပ်ဆောင်အမီတာဘဂျမ်းရဲ့လက်မှတ်ထိုးပွဲတွေကို Khanအလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာသူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျောင်းပြေးပီးသွားခဲ့တယ်။ ဆံပင်ကေညှပ်တာ ကအစ အမီတာဘဂျမ်းကေညှပ်ခဲ့တယ်။တဖက်မှာလဲမိခင်ကျေနပ်အောင်စာကြိုးစားခဲ့တယ်။ Khan ကြိုက်တဲ့ဘာသာကတော့ အိန္ဒိယအနုပညာအကြောင်းတွေပေါ့။
ညဖက်တွေဆို ၇နာရီတိုင်းလာတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ လိုက်ကခဲ့တယ်။ အိမ်ကလူတွေမြင်ရင်မဟုတ်သလိုနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်မိခင်ဖြစ်သူကတော့ သူ့သားခုလိုရူးနေတာကြည့်ပီးပြုံးနေခဲ့လေရဲ့။ ဒီလိုနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့သားရုပ်ရှင်ရူးအတွက် သူနှစ်နဲ့ချီသိမ်းထားခဲ့တဲ့စာအုပ်တချိူ့ကိုပေးခဲ့တယ်။ စာအုပ်က English လိုတွေဆိုတော့ Khanအတွက်အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲဖခင်ဖြစ်သူကKhan ကို 4Skill ကျွမ်းကျင်အောင်စသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဖခင်ပေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပီးချိန်မှာတော့ Khan ဟာသူ့အဖေကဘာဆိုတာကိုသိသွားခဲ့လေရဲ့။
#Taj_Mohammed_Khan ( Khan ဖခင်)
Taj ဟာ LLB MA Art.GA ဘွဲ့တွေရထားတဲ့ပညာတတ် ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းတချိူ့ကိုရေးသားခဲ့သူ။ ပြဇာတ်စာရေးဆရာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာ ဝင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ MA ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ။ နိုင်ငံရေးပုဒ်မနဲ့ထောင်ကျပီးပြန်ထွက်လာချိန်မှာ Khanမိခင်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့သူ။ သူ့ဘဝကိုဇာတ်မြူပ်ထားခဲ့ပီး ကုန်ကားလိုက်မောင်းခဲ့သူ။ Khan ဟာသူ့အဖေ ရဲ့ဘဝမှန်ကိုသိသွားခဲ့ချိန်မှာတော့ အံ့အားသင့်ခဲ့တယ်။ Taj ဟာ Khan ကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆို Khan စာဖတ်နေချိန်ဘေးနားကနေအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ပီးစောင့်ပေးခဲ့တယ်။ နောင်တချိန်မှာ ရှာရွတ်ခန်း ဆိုပီးဖြစ်လာဖို့ပထမဆုံး ဆရာဟာ Taj ဖြစ်ခဲ့တယ်။ Khanဟာသူ့အဖေဆီက ပညာတွေ အသိဉာဏ်တွေ ဟာသအမြင်တွေ လူတွေရဲ့မျက်နှာအမူအရာဖတ်နည်းတွေစာပေရဲ့တန်ဖိုးကြီးမားမူတွေကို များစွာရခဲ့ပါတယ်။ သြော် Khan ရဲ့အတန်းဖော်နောက်ထပ်သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိသေးတယ်။ သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ဘူး နောက်တချိန်မှာ Bollywood မင်းသမီးကြီးဖြစ်လာမယ့် Armita Singh ပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝအပြီး Hansraj ကောလိပ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ Economics မေဂျာရဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပီး မေဂျာနဲ့နှစ်စဉ်ပြဇာတ်အဖွဲ့မှာလူကြမ်းနေရာကနေစပါခဲ့တယ်။ ဒါကတာ့Khanဘဝမှာပထမဆုံးအနုပညာခြေလှမ်းပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ TAG ပြဇာတ်အဖွဲ့မှာပါခွင့်ရခဲ့ပီး ပြဇာတ်ဒါရိုက်တာ Barry John နဲ့ခင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒိနောက် Master တန်းကိုထပ်တက်ခွင့်ရခဲ့ပီး ဒါရိုက်တာ Barry နဲ့လိုက်ရင်း Bollywood ရုပ်ရှင်လောကကိုမအူမလည်နဲ့ဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိအချိန်မှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူ Taj ဟာအသဲကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါပီ။ ဒါကြောင့်ပဲKhan ဟာဖခင်ရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုရင်ထဲထည့်ပီး မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်ရင်း သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူ့အိမ်မက်ကိုမစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါဘူး။ Khan မှာ အမဖြစ်သူနဲ့အကိူဖြစ်သူရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် Khanငယ်ဘဝထဲက အဖိုးဖြစ်သူအိမ်မှာ အနေများခဲ့ပီးKhanနဲ့ကတော့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပဲ အနေများခဲ့သူပေါ့။
ဒီလိုနဲ့Khan ရဲ့ပထမဆုံးBollywoodကို လှမ်းတဲ့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်လာတဲ့ Lekh Tandon ရုပ်သံseries မှာပါခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ၁၅နှစ်သား အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာ Khan အဖေကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ ဖခင်မရှိတော့ထဲ ကသူ့ဘဝမှာဘေးကနေလမ်းပြမယ့်သူမရှိခဲ့ဘူး။ Khan ရဲ့အဖေဟာ သူ့အရွယ်၁၅နှစ်သားထဲကကောလိပ်တက်ဖို့စားသောက်ဆိုင်မှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့တယ် ကုန်စိမ်းလှည်းမောင်းခဲ့တယ်။ ရတဲ့အလုပ်အကုန်လုပ်ပီးတက်ခဲ့တယ်။ဒါတွေကြောင့် Khanဟာ စိတ်ဓာတ်ကျမူမရှိခဲ့ပဲဖခင်ဖြစ်သူနင်းခဲ့တဲ့လမ်းလိုပဲ ကောလိပ်ကိုရအောင်တက်ခဲ့တယ်။ နို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလုပ်ရင်းအိမ်က အမေမသိအောင် ရတဲ့ငွေနဲ့အနုပညာသင်တန်းကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။
Masterတန်းရောက်တဲ့အထိတက်ခဲ့တယ်။ ဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုပဲလိုက်နင်းခဲ့ပီး သူဖြစ်ချင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ဘဝကိုကြိုးစားရင်းခုလို Bollywood ဆိုတာကြီးထဲပထမဆုံး စခြေနင်းနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ Khan အဖေဆုံးမှKhanအမေရဲ့မိဘတွေဟာ ပြန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Khanကတော့သူ့အဖေလောက်ကောင်းတဲ့ လမ်းပြသူမရှိတော့တဲ့အတွက် Khan မိခင်ရဲ့ဖက်ကအိမ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပဲအဆောင်နေခဲ့ပီးတခါတလေမှမိခင်ဖြစ်သူဆီသွားခဲ့ပါတယ်။
” မင်းဘာလုပ်လုပ် လုပ်ချင်တာလုပ် လမ်းဆိုးရောက်တာပြသနာမရှိဘူး လမ်းမှားတော့မလျှောက်နဲ့”
” မင်းကို မင်းအမေပဲလိုတာဝယ်ပေးလိမ့်မယ် ငါ့ဆီလာမတောင်းနဲ့ ငါကမင်းပိုက်ဆံရှိမှ ဝယ်လို့ပြောယုံကလွဲပီးဘာမှမပေးဘူး”
“မင်း ဒါကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလုပ် မင်းအတွက် ဆိုးကျိူးဖြစ်ရင်တောင်တခြားသူတွေကို မထိခိုက်စေနဲ့”
ဆိုတဲ့ Khanအဖေရဲ့စကားတွေဟာ Khanအတွက် တွန်းအားတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ Khan အဖေဟာ Khanကို ကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ကိုယ်ဘဝကိုရုန်းကန်ဖို့သင်ကြားလမ်းပြပေးခဲ့ပေမယ့် သူကင်ဆာနဲ့သေရတော့မယ်သိထဲက သူ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖက်ကသူတချိူ့နဲ့သူ့သား ကိုကူညီပေးဖို့အပ်ခဲ့ပါတယ်။ Khan အဖေဟာ သူမသေခင် သူ့မိသားစုအတွက် Bankမှာသူရထားခဲ့တဲ့ငွေကြေးတွေကိုစီစီဉ်ခဲ့ပါတယ်။
သူမရှိတော့ရင်တောင်သူ့မိသားစုလူလောကအလယ် မသိမ်ငယ်ရအောင် များစွာစီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူကင်ဆာဖြစ်နေတာကိုဖုံးကွယ်ပီး ၄နှစ်တိတိနေခဲ့ရင်း သူသေသွားမှမိသားစုကသိခဲ့ရပါတယ်။ Khan ဟာသူ့အဖေဆုံးတဲ့သတင်းကိုကြားချိန်မှာ ရယ်ပီး ” ဟားး မနောက်ပါနဲ့အမရာငါတို့အဖေက ဒေါင်ဒေါင်မြည် တနေ့ကတောင်ငါနဲ့ဖုန်းပြောပီး မင်းရည်းစားရနေရင်ငါ့လဲပြောဟ Khanရဆိုပီး ပြောနေသေးတယ် ကဲပြောအဖေဘယ်သွားလဲ ” ဆိုပီးမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ နာရေးခန်းမ ထဲကဓာတ်ပုံမြင်မှ Khanဟာကမ္ဘာပျက်မတတ်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ Khan ဟာ TV Series ၄ ၅ခုမှာ ပါခဲ့ပေမယ့် အောင်မြင်မူကြီးကြီးမားမားသိပ်မရခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မူဟာလဲသာမာန်TV Series သရုပ်ဆောင်အဆင့်သာသာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ပဲသူဟာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကတော့ ရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်ဖို့ပဲ။ ဇာတ်လမ်းတွဲထက်ရုပ်ရှင်လောကက Bollywoodမှာဝင်ဖို့ပိုခက်ခဲသလိုတော်ရုံသရုပ်ဆောင်မူနဲ့လဲမရတာအကုန်အသိပေါ့။၁၉၉၁ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ရက်နေ့မနက်တခုမှာတော့ Khanဟာဒေလီကနေ မွန်ဘိုင်းကိုရောက်ခဲ့ပီးBollywood ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရှေ့မှာရပ်ပီး “အဖေ အဖေဖြစ်စေချင်တဲ့ အသုံးဝင်တဲ့လူ တယောက်ဖြစ်ဖို့ သားစတော့မယ် သားကိုတနေရာရာကနေကြည့်နေပေးပါ “လို့ပြောခဲ့ပီး အဲ့ဒိနေ့ကစပီး Khanဟာ Bollywood ရုပ်ရှင်လောကထဲဇာတ်ရန်နေရာကနေစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ရုပ်ရှင်ကား ၄ကားအထိ မင်းသားသူငယ်ချင်းနေရာကပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပီး Khan ရဲ့မျက်နှာဟာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်ဒါရိုက်တာကမှယုံကြည်မူမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၂ခုနှစ်မှာ Deewana ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှာ Khanကိုမင်းသားနေရာကပါဖို့ မိုက်မိုက်ကန်းကန်းရွေးချယ် ခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာကတော့ Raj Kanwar ပါပဲ။ ဒီကားဟာ Khan ကို Best Dubet ဆုကိုရရှိစေခဲ့ပီး သူ့သရုပ်ဆောင်မူကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ဖြစ် လာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကားပါ။ အဲ့ဒိနောက် Khanဟာ ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အမြင်တချိူ့နဲ့ကွဲလွဲစွာလုပ်ဆောင်မူတွေစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ dialouge တွေကိုမကျက်ပဲ သဘောတရားသာယူပီးပြောတာတွေ မျက်နှာအလှအပထက် သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မူကိုလက်တွေ့လောကနဲ့တထပ်ထဲဖြစ်အောင်ပြင်တင်ခဲ့တာတွေ တနေ့၄နာရီအားကစားလုပ် ၃နာရီစာဖတ် တရက်၅ကြိမ်ဘုရားဝတ်ပြု တပတ်၄ရက်သက်သက်လွတ်စားတာတွေနဲ့ Khan ဟာပြောင်းလဲမူများစွာနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပညာကိုပိုမိုလေးနက်အောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒိနောက် Chamatka ကားမှာထပ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပီး Khan ဟာ Bollywood ရဲ့မထင်မရှားမင်းသားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Darr ဆိုတဲ့ကားမှာဒုတိယမင်းသားနေရာကပါခဲ့ရပီး ဒီကားမှာ Khanကလွဲပီး ဆုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကားအပြီး Baazigar မှာတော့ Khanရဲ့ပထမဆုံးBest Actorဆုကိုရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီကားအပြီးမှာတော့ Khanဟာ ရုပ်အနေအထားအရမင်း သားမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် နာမည်ကြီးProductionတွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမူနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ကားတကားပြီးတကားထွက်ဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့်Khan လိုပဲ Bollywood ရုပ်ရှင်လမ်းကြောင်းမှာသူ့ထက်စီနီယာကျတဲ့ တော်တဲ့ချောတဲ့မင်းသားတွေများစွာရှိနေပြန်ပါတယ်။ Khan အဖို့တော်ရုံကြိုးစားရုံနဲ့ သူတို့ကိုကျော်ဖို့ဘဟ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် Khanရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားထွက်တိုင်း ကုန်ကျငွေထက်အမြတ်ငွေဟာအဆပေါင်းများစွာရစေခဲ့ပါတယ်။ Khanရဲ့ကားတကားချင်းစီရဲ့အကြောင်းကတော့အထူးပြောနေစရာမလိုပါဘူး။ အကုန်သိနေကြကြိုက်တာချည်းပါပဲ။
” ကျတော်ဟာ ကမ္ဘာကြီးမှာဘာကောင်ကြီးမှမဟုတ်ဘူး။ ဘာကောင်ကြီး ဆိုတာလဲ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကျတော်မသိဘူး။ ဘာကောင်ကြီး ဖြစ်တာမဖြစ်တာထက် ဘယ်လောက် အသုံးဝင်လဲဆိုတာပဲကျတော်ကြိုးစားတယ်။ ”
Khan ဟာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေအများစုက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်။ဘုရားကျောင်းက ကျမ်းစာတွေလဲသူဖတ်ခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လေးနက်မူတွေလဲ သူရေးသားခဲ့တယ်။ သူ့ဇနီးက ဟိန္ဒူ ။ သူအမြဲပြောတဲ့စကားက ဘာသာတရားတိုင်းဟာမွန်မြတ်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုလက်ခံရင် ဇာတ်ညွန်းကို၇ ခေါက်အကြမ်းဖတ်တတ်တယ်။ ဘာသာရေးတွေ နိုင်ငံရေးတွေ ကိုယ့်နာမည်ရမရတွေထက် Khan ဟာ ဒီကားကိုသူရိုက်ရင်ကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ဘာပေးနိုင်မလဲ။ သူတို့ဘာရမလဲဆိုတဲ့ အချက်တခုထဲကိုကြည့်ပီးရိုက်လေ့ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်လဲ Khan ဟာ ဇာတ်ဆောင်ထက် ဇာတ်ကောင်ကိုပဲ အမြဲရွေးခဲ့တဲ့မင်းသားတလက်ပါ။
” dialouge တွေကျတော်တခါမှအသေမကျက်ခဲ့သလို Action တွေကိုလဲတခါမှပုံသေမကျက်ခဲ့ဘူး။ ခဗျားဟာ အမေ့ဇာပနမှာ Brand အမြင့်အင်္ကျီနဲ့မျက်နှာအနေအထားကျကျငိုဖြစ်မယ်လို့ထင်လား ။ ကျုပ်ကတော့အဲ့အချိန် ငါ့မျက်နှာ အနေအထားကြည့်ကောင်းမကောင်းထက် ရင်ဘတ်ထဲကတက်လာတဲ့မျက်ရည်ကိုပဲအားစိုက်ညှစ်ဖို့ တွေးနေလို့မျက်နှာကတခါတလေ ဖယိုဖရဲဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာဗျ။ နဂိုထဲကကြည့်မကောင်းတော့ ပိုကြည့်ရဆိုးတာပေါ့” (ရယ်လျက်)
Khan ဟာ ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်ငွေ အမြင့်ဆုံးမင်သား အချမ်းသာဆုံးမင်းသားပါ။ Times မဂ္ဂဇင်းကကြေငြာချက်အရ Khan ဟာ ၂၁ရာစုမှာ ဥရောပနဲ့ အမေရိကက လူတွေအားလုံးထက် သြဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အိုဘားမား နဲ့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းတောင် Khan ရဲ့သြဇာကြီးမားမူကိုမမှီသေးကြောင်းလဲ မဂ္ဂဇင်းပေါင်း၂၀၀ကျော်ကကြေငြာထားခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်လာသန်း၆၄၀အထိ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့Khan ဟာ Hollywood ကနာမည်အကြီးဆုံး မင်းသား Top5ယှဉ်တဲ့ဝင်ငွေထက် များနေသေးတာကိုလဲတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ Khan ရဲ့တနှစ်ဝင်ငွေဟာ ဘောလုံးလောကက အကျော်ကြားဆုံးဘောလုံးသမား၃ယောက်ဝင်ငွေထက်၃ဆများနေသလို သူ့ပိုင်ဆိုင်မူနဲ့အောင်မြင်မူက Bollywood ကမင်းသားတွေထဲ ယှဉ်မရသလို ဒုတိယနေရာက Aamir Khan ထက် ဆုပေါင်း၄ဆ ဝင်ငွေပေါင်းအဆများစွာကွာနေသေးတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ Bollywoodရဲ့ ဆယ်နှစ်ဆက်တိုက်အကယ်ဒမီရထားတဲ့မင်းသားတလက်ဖြစ်ပီး သူရထားတဲ့ဆုဟာ ၂၂၃ဆုအထိရှိထားပါပီ။ ကမ္ဘာအနေနဲ့ယှဉ်ရင် No.1ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားဖြစ်နေပါပြီ။ Khan ဟာသူ့အဖေဆုံးပီးထဲကသူရသမျှ အနုပညာကြေးအများဆုကို ပရဟိတထဲသုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “ငါလှူတာ “လို့တခါမှအမည်အဖော်ခဲ့ပဲ တိတ်တဆိတ်လှူဒါန်းမူတွေများခဲ့ပါတယ်။
” ပရဟိတ ဟုတ်လား။ ကျတော်မသိဘူးဗျ အဲ့စကားကဘာဆိုတာ အဖေပြောခဲ့ဖူးတယ်။ အသုံးဝင်တဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့။ လိုအပ်နေသူကို ပိုနေသူကပေးတဲ့သဘောပါ။ ကျတော်ထမင်းဝတယ်။ ဝတ်စရာပေါတယ် သွားဖို့လာဖို့အဆင်ပြေတယ်။ ဒီတော့ကျန်တာကို လိုတဲ့သူတွေကိုပေးတယ်။ဒီသဘောပါပဲ။ လိုအပ်သူနဲ့ပေးချင်သူကြား ဘာmedia ဘာ သတင်းထောက်ဘာ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံမှမလိုပါဘူး”
Khan ဟာ ပရဟိတဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုများစွာ ရထားသလို ကမ္ဘာ့အနုပညာရှင်တွေထဲပရဟိတ အလုပ်ဆုံးအနုပညာရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသူပါ။ UNESCO ဆုကြီးကိုလဲတလော ကမှရထားသူဖြစ်ပီး အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အဟာရချိူ့တဲ့ သူကလေးသူငယ် ၄သန်းကျော်ကိုလဲနေ့စဉ်ထောက်ပံ့နေသူပါ။ WISH Foundation နဲ့အတူ ကမ္ဘာ့အိမ်ခြေရာခြေမဲ့သူတွေအတွက်လဲအိမ်ရာတွေဆောက်ပေးခဲ့သူပါ။ သူTelevisionတွေကရတဲ့ငွေ 75% ကိုလဲလှူဒါန်းထားသူပါ။ NCPEP ရဲ့ပင်တိုင်အလှူရှင်ဖြစ်ပီး Khan ဟာဘာသာပေါင်းစုံကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လဲ NCPEP နဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အများဆုံးအလှူရှင်တွေထဲKhan ဟာတယောက်ဖြစ်ပီး တခါတခါလှူရင် ၁၂သန်း ထက်မနည်းလှူဒါန်းမူတွေနဲ့အတူ Khanဟာအင်္ဂလန်ဘုရင်မ ကပေးတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပရဟိတသမားဆုကိုလဲရရှိထားသူပါ။ ၂၀၀၇ခုနှစ်က ၁၂သန်း ၂၀၀၈ခုနှစ်က အစာအဟာရချိူ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက် သန်း၃၀ ၂၀၀၉ခုနှစ်က စစ်ဘေးသင့်ပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေအတွက် သန်း၃၀ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာတော့ Khan ဟာကလေးဆေးရုံတွေ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေအထိဆောက်ပီးလှူဒါန်းလာပါတော့တယ်။
” ကျတော့ကိုတွေ့ရင် ကျတော်လှူတဲ့ အလှူတွေနဲ့ပတ်သတ်ပီးပြောတာကိုကျတော်မကြိုက်ဘူးဗျ။ ”
Khan ဟာ အိန္ဒိယအောက်ခြေလူတန်းစားတွေအတွက် ဒုတိယဘုရားသခင်လို့တောင် တချို့ကျောင်းသားတွေကပြောဆိုမူကြောင့်မနာလိုသူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့စကားများစွာကိုလဲခံရသူပါ။ဒီတော့ ဒီမင်းသားက ရုပ်ရှင်မရိုက်နိုင်တော့ဘူးထား ဘာဖြစ်မလဲ ?
ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူး။ Khan ဟာ အိန္ဒိယ Bollywood ရဲ့အကြီးဆုံး ရုပ်ရှင်Studio ကြီးဖြစ်တဲ့ RCE Visual Effects Studioကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဒီStudio ကနေထွက်တဲ့ ကားတွေကလဲ ကြောက်ခမန်းလိလိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားတွေပါ။ ဒါပဲလား ? ဘယ်ဟုတ်ပေါ့မလဲ KIDZANIA ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး Company တွေထဲကတခုဖြစ်တဲ့ Companyရဲ့ Share အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပီး တခြား Clothes Company ၆ခုကိုလဲပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ Khan ဟာ ဖခင်နဲ့မိခင်အတွက်ရည်စူးပီး ကင်ဆာ Foundation ကိုလဲထူထောင်ထားပီးကမ္ဘာပေါ်က ကင်ဆာFoundation တွေထဲက တတိယအကြီးဆုံးFoundationပါ။
ဒီFoundation.ဆေးရုံမှာအသုံးပြုတဲ့ဆေးကုသပစ္စည်းတွေဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆေးရုံ၇ခု ထဲပါဝင်ထားပီး နိုင်ငံတကာကနာမည်ကြီးပါရဂူတွေကိုခေါ်ယူငှားရမ်းထားတဲ့ဆေးရုံကြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ KKR Cricket Club ရဲ့ share တဝက် ကိုပိုင်ဆိုင်သူလဲဖြစ်ပီး KKR ဟာ ကမ္ဘာ့ပရိတ်သတ်အများဆုံး Club ၂၀ထဲစာရင်းဝင်ပါ။ KKR ရဲ့ပရိတ်သတ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကနာမည်ကြီးဘောလုံးအသင်းfan တွေထက်၂ဆနီးပါးပိုများပီး ဝင်ငွေအရလဲ ၃ဆနီးပါးကွာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ Khan ဟာမင်းသားတယောက်မဟုတ်တော့ရင်တောင်သူက နာမည်မသေတော့တဲ့ ပရဟိတသမားဆက်ဖြစ်နေဦးမယ့် သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မူတွေပါပဲ။
ဒီလောက်နာမည်ကြီးတာ သတင်းဆိုးတွေတော့ရှိမှာပေါ့ ? Khan ဟာသူ့ဇနီးကို၁၉၈၆ခုနှစ်မှာစချစ်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇနီးဖြစ်သူမင်းသမီး Gauri ရဲ့မိသားစုဟာ Khanလို အစ္စလာမ်တယောက်သာမာန်မင်းသားတယောက်နဲ့သူတို့သမီးကိုသဘောမတူခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Khan ဟာသူအောင်မြင်တဲ့တနေ့မှ Gauri ဆီပြန်လာပီးသူ့မိဘတွေသဘောတူနိုင်တဲ့ယောကျာ်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ၆နှစ်ခွဲကြာပီးချိန်မှာတော့ Khanဟာအောင်မြင်တဲ့မင်းသားတလက်ဖြစ်လာခဲ့ပီး Gauri ကိုလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားထဲKhan ဟာဘယ်မိန်းမနဲ့မှ နာမည်မထွက်ခဲ့သလိုလက် ရှိအချိန်ထိလဲ မိန်းမကိစ္စကင်းရှင်းခဲ့တဲ့ရှားပါးမင်းသားတယောက်ပါ။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၂၅နှစ်ထဲရောက်ခဲ့တဲ့ယနေ့အချိန်ထိ Khanဟာ ဘယ်မင်းသမီးနဲ့မှ သတင်းမထွက်ခဲ့ပဲ ကမ္ဘာမှာရော Bollywood မှာပါရှာမှရှားတဲ့ သစ္စာရှင်အချစ်သူရဲကောင်းကြီးပါ။
လက်ရှိမှာ Khan ဟာ FAN ဆိုတဲ့ကားကြီးကို ထွက်ထားပီး ထူးထူးခြားခြားပဲအသွင်မတူတဲ့ Effect တွေနဲ့နှစ်ကိုယ်ခွဲသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Maneesh Sharman ကိုယ် တိုင်တနေ့၁၆နာရီအပင်ပန်းခံရိုက်ကူးလာခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာလဲ Khan အဖို့ထုံးစံအတိုင်းပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းတဲ့ကားတကားပေါ့။လက်ရှိမှာ ဒီကားဟာ ၃ရက်အတွင်း ကုဋေ ၁၁၀ရရှိ ထားပီး ကြောက်စရာအရှိန်နဲ့ကမ္ဘာအနှံ့ကိုထိုးဖောက်ထားပါပီ။
” ကျတော် အောင်မြင်မူကိုမသိဘူးစိတ်လဲမဝင်စားဘူးအကယ်ဒမီလား? အရုပ်တခုနဲ့၁မိနစ်စာမိန့်ခွန်းလို့ပဲမြင်တယ်။ ကျတော့်အလုပ်ကိုကျတော်အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေရရင်တော်ပီ။ ဘာဆုမှ ပေးစရာမလိုပါဘူး။
Khan ( ထူးချွန်ဆု ၂၂၆ ဆုရှင် )
ဒါကတော့ ပရဟိတသမားကြီး ကမ္ဘာ့နံပတ်တစ်မင်းသားကြီး အိန္ဒိယရဲ့အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင်သူထဲကတယောက် သစ္စာရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Khanရဲ့အကြောင်းပါပဲ။ သူရိုက်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေး လူမူရေး နိုင်ငံရေး လူသားဆန်မူ အချစ် အလွမ်း သိပ္ပံ ဟာသ ကားတွေကိုကြည့်ရုံ နဲ့ ဒီမင်းသားဟာ ကမ္ဘာ့နံပတ်တစ် ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို သိနိုင်ပါတယ်။
[ ဖြေရှင်းချက် -Metal ဖက်ကဖြစ်တဲ့အတွက် ခုလို Movie ဖက်က နံပတ်တစ်ကိုမတောက်တခေါက်လေ့လာအားနဲ့ရေးမိတဲ့အတွက် လိုအပ်ချက်များအလွဲများပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မလေးစားသလိုရေးမိတာတွေပါရင် Khanရဲ့ အမာခံမြန်မာ fanတွေကို အလေးအနက်တောင်းပန်ပါတယ် ။ ထောက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်]
[ Part2မှာ ရှာရွတ်ခန်းနဲ့ဘာသာရေးဂိုဏ်းတွေရဲ့ ပဋိပက္ခတွေ အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ပြသနာတွေ သူရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ပရဟိတအခက်အခဲတွေ Bollywood ရုပ်ရှင်လောကထဲ အစ္စလာမ်နဲ့ဟိန္ဒူပြသနာတွေကြား သူပါဝင်ခဲ့မူတွေ သူရိုက်ခဲ့တဲ့တချိူ့ကားတွေနဲ့ ဘာသာရေးပြသနာတွေကို ဆက်ဖော်ပြချင်ပါသေးတယ် ]
Ref . Quora
Inc Magazine ( India )
Posted in PeopleTagged world actors
Previous post ကမ္ဘာကျော် တိုက်တန်းနစ် ရဲ့ အထူးအဆန်းအချက်အလက် အကြောင်းစုံ
Next post လိပ်ပြာလုံတဲ့ဘဝပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်